Shariif Xasan “Maamulka Koonfur Galbeed wuu diyaariyay liiska musharixiinta Aqalka Sare” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan “Maamulka Koonfur Galbeed wuu diyaariyay liiska musharixiinta Aqalka Sare”
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shaaca ka qaaday in maamulkiisa uu diyaariyay liiska musharixiinta 8-deeda xubnood ee Aqalka Sare uga matali doonta baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in liiska musharixiinta la diyaariyay islamarkaana ay ku jiraan musharixiin haween ah oo laba kursi u sharaxan, ayna dhawaan u gudbin doonaan guddiga doorashooyinka dadban.
“Maamulka Koonfur Galbeed wuu diyaariyay liiska musharixiinta Aqalka Sare, waxaana ku jira 2 haween oo ka mid ah musharixiintaasi, waxaana liiskaasi maalmaha soo socdo loo gudbin doonnaa guddiga doorashooyinka, waxayna iyagane u gudbin doonaan baarlamaanka, waxaana rajeynaynaa in todobaadka soo socdo la ansixiyo” Sidaas waxaa yiri Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Dhinaca kale, maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa horey u sheegay in ay diyaar yihiin xubnaha maamuladooda uga mid noqonaya Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya, waxaana la sugayaa maamulka Jubbaland oo ugu danbeyn gudbin doona maalinta Jimcaha ee soo socota.
Ugu dambeyntii, maamulka Puntland ayaa diyaariyay ilaa 44 xubnood oo u sharaxan 11 kursi oo Aqalka Sare ka mid ah, taas oo ka dhiganta in kursi waliba ay u tartamayaan 4 musharax, waxaa la filayaa in xilliyada soo socdo liiska ay musharxiintaasi ku qoran yihiin loo gubdiyo guddiga doorashooyinka dadban iyagoona kadib usii gudbin doonna baarlamaanka si loo ansixyo.